China Valve mveliso kunye nabenzi | Iimpawu kunye nobunjineli
Ngama-2 amashishini apheleleyo kwaye inani lamaqabane axhasayo ekuxhaseni ixesha elide ahlangabezana neemfuno zabathengi abahlukeneyo kwimveliso yokuphosa (kwizinto ezahlukeneyo kunye nenkqubo yokuphosa), ukutyabeka kunye nokutyabeka umphezulu njl. , Sityala esinye i-RMB yezigidi ezingama-20 ukuphucula amaziko okusekwa.
Ngaphezulu kweminyaka engama-30 yeemveliso ezithumela kwamanye amazwe amava / umgangatho ophezulu kunye neqela le-QA lobugcisa / eliqinileyo / ukuphuhlisa kunye nabathengi kunye nokukhula kunye nomqondo, siya kufezekisa intsebenziswano yokuphumelela, kwaye sizuze igama elihle kwiimarike zehlabathi jikelele.
Ingcaciso yeMveliso : Pump & Valve Ivoti Izahlulo
. Pump & Valve siwisa Izahlulo zethu ezinikezelwa kumazwe aseYurophu njengoko OEM okanye emva iindawo kwimarike iminyaka engaphezu kwama-30 kwaye bafumane igama elihle kunye nolawulo elungileyo consistence umgangatho, ukuhanjiswa kwangexesha, ixabiso elifanelekileyo.
Isinyithi, i-Ductile Iron, i-alloy iron, i-Carbon steel, i-Alloy Steel, i-Stainless steel, i-Brass, i-Bronze, i-aluminium, ……
Inkqubo yokuphosa esiyisebenzisayo: Ukuphosa isanti ngentlabathi, ukuphosa ngentlabathi yesanti, ukugoba iShell, ukulahla uTyalo-mali (Ukuphosa amanzi ngeglasi, ukulahla i-Silica-sol, ukulahla amagwebu okulahla), ukungunda okusisigxina, ukufa komlinganiso, umgca wokubumba ngokuzenzekelayo, njl. .
Imveliso wokuvavanya ulwazi:
I-Gray iron kunye ne-Ductile cast castings: 6000-10,000mts / ngonyaka
I-castings yentsimbi: 3,000MT / ngonyaka.
Ukuphosa i-Stainless: 800 MTS / ngonyaka
Ukulahlwa kwesinyithi okungasebenziyo:
ICopper, Brass & Nickel Bronze: 400 MTS / ngonyaka
IAluminiyam: 500 MTS / ngonyaka
Uvavanyo lokuvavanya ulwazi
Exhotyiswe nge-SPECTROMAXX, / Spectrograph 2D Vedio Measurement / Rough meter, Altimeter / Hardness-testing / Pressure testing / CMM
Izixhobo zokulinganisa kunye nezilinganisi ziyahlolwa yi-ofisi ekhethekileyo veki nganye.
Kukho umhloli we-IPQC, ukulandelelana kunye nokuhlolwa kokugqibela ukulawula umgangatho.
Siqinisekile ukuba iimveliso zethu ezikumgangatho ophezulu kunye nenkonzo ebalaseleyo iya kutsala ukuxabisa abathengi ngakumbi nangakumbi. Ukuqhagamshelana nathi linyathelo lokuqala lokwakha ubudlelwane obunempumelelo kunye nathi. Ukuba unomdla kuyo nayiphi na imveliso yethu, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi ngolwazi oluthe kratya. Sijonge ukusebenzisana nawe kwikamva elikufutshane.
Okulandelayo: Izithuthi zilahla iinxalenye
Iinxalenye Valve Ball
Iinxalenye Butterfly Valve
Amacandelo oLawulo lweValve
Icandelo leValve yeSango
Iinxalenye Valve Solenoid
I-Al / Cast Iron Handwheel
Aluminium / Brass Storz Fire Hose yemiqadi yokuhlanganisa Kwaye N ...
Brass intloko zokuchela umlilo s sokuchela amanzi s ...
Izixhobo ductile zentsimbi zila kunye nokuhlangana ...
Ukufakwa kweentsimbi ezingenasici
Izithuthi zilahla iinxalenye